CUCUMBER "ALTAI": SHARAXAAD KA MID AH DABEECADAHA, ABUURISTA IYO DARYEELKA, NOOCYADA DHALIDDA IYO BEERISTA ABUURKA (SAWIRKA) - BEER CAGAARAN
Sida loo abuuro oo u koro qajaarka "Altai"
Kala duwanaanta cucumber "Altai" waxaa loo tixgeliyaa inay tahay mid ka mid ah waxyaabaha ugu guulaha badan ee taranta casriga ah. Khudraddan ayaa siinaya wax-soo-saarka hodanka ah, sidoo kale sidoo kale wuxuu u adkaystaa dhammaan noocyada cimilada hawada. Si ka duwan noocyada kala duwan ee noocyada kala duwan, geedkaas waa mid guud, maxaa yeelay waxaa loo isticmaali karaa qaabka cayriinka, iyo sidoo kale mid ka mid ah maaddooyinka nooc kasta oo suxuunta iyo pickles. Si kastaba ha ahaatee, ma bannaanka u badan maanta go'aansaday in ay ku koraan qajaar this qotoda gaar ah, gaar ahaan cimilada adag. Marka xigta, waxaan si faahfaahsan uga fiirsan doonaa sirta ugu muhiimsan ee beerashada guul leh ee qajaarka "Altai".
"Altai" waxaa loola jeedaa wakiilada caadiga ah ee cirridka Cucumber, Pumpkin family. Tani waa dalag cagaaran oo caadi ah, taas oo ah geedo dabiici ah oo ah nooca canabka ah oo leh geed dabiici ah. Qeybta, waxaa laga yaabaa in lagu soo koobo ama wax yar ka soo baxo, dusha sare waxaa ku jira timo yaryar oo badan, kuwaas oo siinaya astaamaha qaaska ah. Qiyaasta koritaanka qajaarku waa dhexdhexaad, waxay ku xiran tahay arrimo badan, inta badan cimilada, iyo sidoo kale xaaladaha kale ee sii kordhaya. Sidaa darteed, dhererka qaabka dhaqanka ee xaaladaha dabiiciga ah waxay ku kala duwanaan karaan inta u dhaxaysa 1-1.2 m.
Ma taqaanaa? Kobcinta dhaqanka qajaarka ayaa bilaabay qiyaastii 6 kun oo sanno ka hor dhulka dhulwaynaha casriga ah ee Hindiya iyo Hindiya.
Qaar ka mid ah caleemaha lateral ayaa lagu sameeyay qaabka ugu muhiimsan, taas oo ku xidhan xaaladaha sii kordhaya, tiradoodu way kala duwan tahay 3 illaa 5. Dhinaca hoose ee stem waxaa jira habab gaar ah, antennae loo yaqaan. Iyada oo ay ku caawiyaan, dhirta ayaa ku xiran taageerada kor ku xusan. Waxay ka samaysan yihiin noodeska asliga ah, laga bilaabo 3-5 knots u dhow ciidda, gaaraya ugu dambeyntii sare. Caleenta farabadan oo leh qaab kale ayaa loo sameeyaa dhinaca caleemaha dhinaca ee biiyaha ugu weyn. Waa caleemo waaweyn oo kala duwan oo dhexdhexaad ah oo ku saabsan 10-15 cm. On dhinaca of stem waxaa jira farqi ah on waraaqaha, taas oo ah sifo muuqaal ah ee dhammaan xubnaha Cucumber cirrid. Midabka caleenta ayaa badanaa dhalaalaya oo cagaar ah, laakiin xilliga abaarta waa ay fujin kartaa.
Nidaamka asaasiga ah ee nooca "Altai". Waxaa calaamad u ah xididada ugu muhiimsan, xididada yar yar ee xidideysan, oo daboolaya timo badan. Cabbirka ugu weyn ee nidaamka xididka waa qoto dheer oo ku saabsan 25 cm, laakiin xididdada shisheeye ka dib waxay buuxin karaan meel bannaan oo ku saabsan 1-1.5 m laga bilaabo xididka ugu muhiimsan. In lagu koriyo, at qoyaan badan, nidaamka xididku wuxuu intaa ka dib qaabeeyaa hababka xirmooyinka (ee wadooyinka caleemaha, jilibka yar, iwm).
Ma taqaanaa? Cucumber waa mid ka mid ah dhowr noocyada beeraha sannadlaha leh nidaam xidid oo gaar ah. Dhererka wadarta qaybta dhulka hoostiisa ee dhirtu waxay ka badan tahay xayawaanka ilaa 100 jeer.
Ubaxa qajaarku wuxuu bilaabmaa 35-40 maalmood ka dib beero abuurid. Qaar ka mid ah ubaxyo shan jibbaaran oo hooska jaalaha ah ayaa u bislaadaan dhirta. Waxay u kala qaybsan yihiin dumar iyo rag, kuwaas oo lagu gartaa pistil ama stamens, siday u kala horreeyaan. Ubaxyada dheddiguhu way badan yihiin waxayna ka weyn yihiin kuwa labka ah. Waxay ku yaalaan xiga dhinaca labka ah, marxaladaha dhirta ee 1-2 qaybood, laakiin mararka qaarkood lambarkooda waa la kordhin karaa (iyadoo ku xiran xaaladaha sii kordhaya). Pollination waa entomophilic, ka dib markii ay ugxan aftada waxaa la aasaasay on warshadda, kaas oo koraa ilaa midhaha miraha leh tiro badan abuur. Cucumber "Altai" waxaa loogu talagalay beerista gudaha iyo warshadaha cimilada qabow ee waqooyiga, sidaas darteed noocyada kala duwan waxaa kudhaca jirdhiska iyo xilliga gaaban ee sii kordhaya. Miro la soo ururiyey ayaa lagu kala soocayaa bandhigyo sare iyo sifooyinka sare ee dhadhanka. Waxay u isticmaalaan labadaba qaab cayriin iyo diyaarinta noocyo kala duwan oo pickles ah.
Noocyada kala duwan ee kala duwan ee "Altai":
stem gaaban (ku xiran noocyo la xiriira);
heerka sare ee caleenta;
miraha noocyada fiiqan;
baaxadda yar iyo midka jimicsiga miraha cad;
tirada yar ee abuurka ee miro.
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee kala duwan:
aan qabin xaalad ciid ah iyo nidaam cimilada;
naaqus firfircoon bartamaha bisha Juun;
midnimada guud ee midhaha;
cabbirka ugu fiican iyo qaabka pickles ee pickling;
dhalidda sare ee dhalidda;
adkaysiga dhirta ee cudurada kudka ah ee budada ah ee budada iyo mooska qajaar.
Dhibaatooyinka qajaarka "Altai" waxoogaa yar. First of dhan, waa muddo gaaban ee fruiting, kaas oo la xiriira dabeecada physiological ee jirka warshad, biqilka yar ee abuurka ee ciidda furan, iyo sidoo kale dalbashada qajaar ee kulaylka dheer. Intaa waxaa dheer, kala duwan ma kala duwan yihiin iska caabin kasta oo noocyada cayayaanka, sidaas darteed, agrotechnical ee ay beerashada daruuri u baahan tahay daaweynta dhirta leh sunta cayayaanka adag.
Kala duwanaanshuhu wuxuu leeyahay dhalid aad u sareeya. Laga bilaabo 1 jibbaaran. m xilliga oo dhan ee dhirta firfircoon ee xaaladaha ciidda furan waxay qaadan karaan 3.5-4 kg oo khudrad ah, taas oo ku saabsan 35-40 ton halkii hektar. Noocyada kala soocidda waxay dhacaan 45-50 maalmood ka dib caleemaha ugu horreeya, halka goosashada waxaa la sameeyaa ugu yaraan 1-2 jeer toddobaadkii. Horumarka miraha wuxuu u dhacaa si siman, laga bilaabo ugxan si buuxda bislaanshaha, waxay qaadataa ilaa 8-12 maalmood celcelis ahaan.
Noocyada noocan oo kale ah oo qajaarka ah ayaa lagu kala duwan yahay: "Bouquet", "Qof walba waa masayr", "mucjisada Shiinaha", "magnetic puch", "Phoenix 640", "Paratunka", "Siberian garland", "Amur f1", "Jarmal".
Miraha dabeecadda ee kala duwan ee cucumber "Altai":
miisaanka celceliska - 85-115 g;
celceliska dhererka (bisaylka buuxa) - 9-11 cm;
foomka - oval, nooca qashinka;
Nooca maqaarka - ciriiri, cufan, casaan-gaduud, oo leh caddad cad oo cad;
midabka - hodan, cagaar dhalaalaya;
saamiga dhererka iyo width waa 3.5: 1.
dhadhanka - uuban leh caraf udgoon, qadhaadh lahayn;
gaadiidka waa mid sare, miraha waxay ku habboon yihiin gaadiidka muddada dheer.
Inta badan qajaar la abuuray geedo sii kordhaya, sidaas darteed xulashada tayada beerashada tayada waa xaaladda ugu weyn ee helitaanka wax-soosaarka hodanka ah, iyo sidoo kale tayo sare leh oo caafimaad leh. Si kastaba ha ahaatee, inkastoo tan, bannaanka badan oo aan khibrad lahayn dayacin xulashada taxaddar ah ee geedo, ku tiirsanaanta daacadnimada iibiyeyaasha. Sidaa darteed, beerashada ee goosashada dheer-sugitaanku waa mid adag mararka qaarkood. Wixii beerto ee ciidda furan ee gobollada waqooyiga ku habboon dhirta da'doodu tahay 25-30 maalmood ka dib beero. Waxay caadi ahaan buuxiyaan shuruudaha soo socda:
dhererka qaybta anteenada - 25-30 cm;
dhererka jilibka wareega - aan ka badnayn 5 cm;
dhumucda jilibka-jilibka waa 0.5 illaa 1 cm;
tirada caleemaha - 5-6 kaan;
xajmiga waraaqaha hoose waa 16 cm dhexroor.
Geedo heer sare ah oo soddon-maalmood ah ayaa sidoo kale lagu gartaa internodes gaaban, xoog leh afkoda iyo iftiin, caleemo cagaaran madow. On jilibka semi-xoqdo, dhirta noocan oo kale ah waa inay si cad u muuqdaan finan yaryar cad, kuwaas oo ah xididada xididada yar yar. Dhirta noocan oo kale ah waxaa lagu gartaa sicir barar sare, iyo sidoo kale iska caabin ah dhaxan habeenkii.
Waa muhiim! Haddii laguu soo bandhigo inaad ku iibsato geedo badan oo dheer oo caleemo cagaaran leh - hubi inaad diiddo alaabta wax beerto. Dhirta Kuwani waxay ku koraan xaaladaha la'aanta iftiinka, sidaas darteed inta badan ma laha awood sare.
In cimilada iyo kulaylka diiran, geedo ka yar yihiin ku habboon beerto in dhulka furan (15-20 maalmood). Geedo noocan oo kale ah waxaa lagu gartaa sifooyinka soo socda:
dhererka qaybta anteenada - 15-20 cm;
tirada caleemahaas - 2-3 rodol.
xajmiga waraaqaha hoose waa 10-12 cm dhexroor.
Waxaa lagu talinayaa in la helo alaab beerto oo ku yaal dukaamo khaas ah, maadaama ay jirto feejignaan sare oo la kulmi karo qalabka beeraha tayada liita ee suuqa suuqyada iyo dukaamada internetka.
Marka aad dooranayso geedo, waa lagama maarmaan in si taxadar leh loo baadho dhammaan dhirta joogitaanka cudurada kala duwan, iyo sidoo kale cudurrada. Dhirta waa in ay ahaato mid qoyan, cagaaran cagaaran, iyada oo aan jirin wax lebis ama jirro nabar ah. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la baaro qaybta hoose ee caleemaha, sababtoo ah cayayaanka kala duwan badanaaba waxay ku koraan (aphid, caarada caarada, iwm.).
Sidoo kale waa muhiim in la fiiriyo dheriga, waa in aysan laheyn wax waxyeello ah iyo dildilaacyo, maadaama ay tani tahay calaamada ugu weyn ee dayacaadda dhirta, iyo sidoo kale dhaawaca nidaamka xididada hindisada. Haddii ay suurtagal tahay, hubi inaad eegto xaaladda jiritaanka geedo geedo. Waa in si fiican loo horumariyo, iyada oo aan wax khasaare ah haysan iyo dhaawacyo halis ah. Rootiyadu waxay si buuxda u buuxinayaan substrate dheriga. Tani waxay ka caawisaa ka saarista dambe ee geedo ka taangiga, iyo sidoo kale muujinaysaa koritaanka wanaagsan ee koritaanka geedo.
VIDEO: SIDEE AYAAD KA HELI KARTAA SHARCIGA AADAN Xaaladaha qaarkood, soosaarayaasha aan walbahaarka lahayn waxay kiciyaan noocyo kiciya oo kobcaya iyo bacriminta firfircoon ee geedo leh Bacriminta macdanta, taas oo si weyn u kordhisa heerka korodhka koritaankooda sidoo kale waxay hagaajinaysaa sifooyinka morphological. Si kastaba ha noqotee, geedo noocan oo kale ah badi uma ahan kuwo u adkaysta dhammaan noocyada caqabadaha deegaanka, taas oo keeneysa dhimashadiisa. Si loo aqoonsado dhirta noocan oo kale ah waa mid sahlan. Waxaa la siiyaa sood cagaaran oo aad u culus (marka loo barbar dhigo geedo kale), iyo sidoo kale yar yar ee caleemaha jihada ee nidaamka xididka (oo ay sabab u tahay koronto la'aan ah nitrogen).
Geedo lagu iibsaday waxay u baahan yihiin in la geeyo meel joogto ah dhowr saacadood ka dib iibsashada. Haddii loo qorsheeyay in lagu qaado gaadiidka fog, dhirta waa in laga ilaaliyaa in la qalajiyo. Si taas loo sameeyo, waxay u baahan yihiin inay si joogto ah u qoyaan leh buufin.
Sida kor ku xusan, qajaarku ma aha mid dhaqameedka awoodda leh, sidaas darteed, waxaa suurtogal ah in lagu koro warshad leh guul leh ficil ahaan wax kasta oo substrates ah. Laakiin si aad u hesho hanti aad u hodan, waa inaad ka taxadartaa xaaladaha ugu raaxeysan ee dalagga. Caadi ahaan, "Altai", sida noocyo kale, waxay u baahan tahay ciidda si fiican loo miiro oo si fiican loo miiro, oo leh waxyaabo hooseeya ee xeryahooda nitrogenous. Xulashada ugu wanaagsan ee isaga ah waa isku dar dabiici ah oo ka kooban qaybo siman oo ah humus, peat, sod dhul iyo balka. Laakiin si ay u gaaraan substrate kaamil ah waxay noqon kartaa carrada si fiican loo bacrimiyey ama carrada loamy. Waxa kale oo aad si guul leh u kobcin kartaa dhaqanka ku yaala carrada kale oo leh awood dheellitiran iyo iftiin. Tan waxaa lagu gaari karaa iyada oo la adeegsanayo ciid cadi ah, kaas oo lagu qasi karo substrates xad dhaafka culus.
Mid ka mid ah xaaladaha ugu muhiimsan ee dalagga beeraha waa pH ee ciidda. Dhiroonka aan u dulqaadanin substrates acidic, sidaas xitaa a acidification yar ee ciidda waxay sababi kartaa kobcinta xakamaynta iyo xitaa dhimashada dhirta. Ugu fiican ee dhan, acidity ee ciidda waa qiyaasta 6.5-8. La soco tusayaasha tilmaamayaasha carrada gaarka ah.
Goosashada wanaagsan ee dalagyada beerta waxay ku xiran tahay sida aysidhka ciidda, sidaas darteed waa inaad barataa sida loo ogaado kiimikada guriga iyo sida, haddii loo baahdo, si aad u debciso ciidda.
Waxaa sidoo kale muhiim ah in aad dareenka ka qaadato horey u soo qaadashada dhaqanka. Best of dhan qajaar koraa ka dib markii basasha, kaabajka, yaanyada, digirta iyo sideratov. Waa inaadan korin dhaqanka ka dib wakiilada qoyska Pumpkin (bocorka, qaraha, dhirta, iwm.), Waana inaadan ku tashanin beerashada qajaarka ee monoculture.
Xulashada ugu wanaagsan ee beerista khudradda waa mid soo noqnoqonaya 4 sano:
qajaar - dhaqanka weyn;
baradhada hore - hormuudka hore;
Basasha - hormuudkii labaad ee hore;
beetroot - saddexda hormood ee hore.
By diyaarinta ciidda for beerashada dhirta qajaarka tan iyo dayrta, ka dib goosashada goosashada ugu dambeeyey. Waqtigaan, goobta wuxuu u baahan yahay inuu ka saaro haraadiga dhaqanka hore, iyo sidoo kale wasakhda kale, ka dibna si fiican u bacrimiya ciidda. Si arrintan loo sameeyo, 1 digrii. m dhulka aad u baahan tahay inaad ka samayso 3 ilaa 6 kg oo ah digada ama humus iyo qiyaastii 30 g oo ah walxo kasta oo potassium-fosfoor. Si aad u bixiso iftiin qoyan cufnaanta, ciidda xisaabinta waxaa lagu xisaabiyaa heerka 1-2 baaldiyoo 1 mitir labajibbaaran. m
Haddii ay lagama maarmaan noqoto, alkaliso substrate ah dawlad dhexdhexaad ah ama daciif ah. Si arrintan loo sameeyo, 1 digrii. M aagga wuxuu ka qaybqaataa 200 ilaa 500 g oo ah ash alwaax, niigsan, burka dolomite ama lime biyo leh. Taas ka dib, carrada waxaa si fiican loo xoqay oo keligiis ka tagay ilaa dabaysha guga.
Waa muhiim! Ma aha lagama maarmaan in la qiyaaso ciidda la soo saaro dayrta madaama ay leedahay si buuxda u qaboojiso. Tani waxay yaraynaysaa fursadaha geedo in ay ku dhacdo dhammaan noocyada cayayaanka iyo infekshannada ka yimaada ciidda, iyo sidoo kale burburiyaan abuurka geedaha.
Marxaladda soo socota ee diyaarinta beerta beeritaanka qajaarka waxay bilaabmaysaa guga, dhowr toddobaad ka hor inta aan la beeri. Marxaladdan, goobta waxaa lagu daray bacriminta macdanta-organic. Doorka waxaa lagu ciyaaraa isku dar ah 3 kg oo ah humus, 250 g oo ah dhuxul la jajabiyey iyo 50 g oo ah bacriminta macdanta oo kakooban si ay u kala doortaan, isticmaalka qashinka shaqeyntu waa qiyaastii 3 kg / sq. m. Markaas ciidda waa in la xoqo si qoto dheer ah 10-15 cm, ka dibna dusha sare loo dhigo aagga goobta.
Inkasta oo ay iska caabinayso barafka, qajaar Altai wali waxaa iska leh wakiilada gobollada kulaylaha iyo kulaylaha, sidaas awgeed warshadani waxay si gaar ah ugu baahan tahay kuleylka iyo qoyaanka. Dhamaan khudraddaas oo dhan waxay dareemaan meelo furan oo iftiin leh, sidaas darteed waa in laga baxo geedo dheer iyo noocyada beeraha oo dhan. Isla mar ahaantaana, beerto waa in la siiyaa qaabab taageera oo ka ilaaliya nooc kasta oo waxyeello ah. Si koritaanka raaxada ah ee qajaar, heerkul caadi ah maalin walba ugu yaraan +20 ° C ayaa loo baahan yahay. Inta lagu jiro maalinta, waa in ay ahaataa + 25-28 ° S, iyo habeenkii waa in aysan hoos u dhicin +18 ° C. Xaaladdan, xaaladaha ugu raaxada leh ee fruiting ayaa la abuuray, tan iyo heerkulka ka hooseeya +16 ° C, ugxan-geed on khudradda ma foomka.
Waa in laga ilaaliyo beeraha iyo kuleylka, heerkulku waa + 35-40 ° C oo hor istaagaya kobcintooda, iyo sidoo kale fruiting. Sidoo kale waa lagama maarmaanka u ah qajaarka waxay jecel yihiin qoyaan badan (80-90%). Waxay xoojisaa koritaanka dhirta, iyo sidoo kale kor u qaado fruiting firfircoon. Taasina waa sababta beeraha loo beeray u baahan yihiin waraabinta joogtada ah, gaar ahaan xilliyada abaarta.
Kobcinta geedo ee dhaqanka khudradda ayaa leh dhowr marxaladood. Waxyaabaha abuurka waa in la diyaariyaa horay, iyo sidoo kale bixinta xaaladaha ugu wanaagsan ee koritaanka degdegga ah iyo daryeelka lagama maarmaanka ah. Xaqiijinta habboon ee dhammaan qiyaasaha agrotechnikada waxay suurtogal u tahay in ay helaan dhirta caafimaadka leh iyo hubiyaan fruiting muddo dheer.
Diyaarinta miraha qajaar ah ee geedo bilaabmaa dhowr maalmood ka hor taariikhda la qiyaasay ee beereed. Marka hore waxaad u baahan tahay inaad ogaatid da'da farcanka. Laguma talin in aad Gagaashid abuurka cusub, sida abuurka 2-4 sano jir ah waa kuwa ugu gaaban. Farshaxanka waa in lagu hubiyaa wax-qabad, sababtoo ah waxay ku shubeen weel hufan oo hufan oo ka buuxsamey 3% saline oo saline ah, oo lagu diyaariyey saliida miis. Abuurka tayo sarre leh si tartiib tartiib ah ugu deg degga, hoose, aan lahayn hindhiso, daboolka sare ee filimka biyaha.
Tiro badan oo tayo leh uma baahna daaweyn gaar ah, laakiin si habboon Si loo ilaaliyo geedo ka soo infekshin kala duwan, abuurka waa in la sun ah. Nidaamkan waxaa lagu sameeyaa iyadoo la isticmaalayo xal 1% oo ah kiniinka potassium ama 70% khamriga. Abuurka waxaa lagu hayaa dareeraha nadiifinta 25 daqiiqo, ka dibna waxaa si fiican loogu biyo raaciyaa biyo diirran. Ka hor inta beeritaanka dhulka ku furan, abuurka laisugay ayaa marka hore la kala jaray. Si arrintan loo sameeyo, waxay ku faafaan maro nadiif ah ama faashad leh meel fog oo ah 1 cm ka mid ah midba midka kale, ku duudduubay dusha lakabka isku midka ah, ka dibna lagu meeleeyo weel wax lagu kariyo oo qoyan oo qoyan biyo diirran. Muddo 2-3 maalmood ah heerkul ah + 20-25 ° C, miraha waxay bixiyaan dhalo yar oo qiyaastii 3-4 mm dheer, kadib markii ay diyaar u yihiin in lagu beeray substrate.
Beerka ku kaydi weelasha yar yar ee leh qoto dheer oo aan ka badnayn 12 cm Qaababka beerta gaarka ah ama dherooyinka caaggu waxay ku habboon yihiin ujeedooyinkaas, laakiin marka maqnaanshaha, waxaad isticmaali kartaa koobabka caag ah ee la tuuri karo. Substrate ee dheryihii ayaa dhajiyay, laakiin iyada oo aan dheeri ah, sida dhirta dhalinyarada u baahan tahay ciidda dabacsan oo si fiican u hawo. В качестве грунта для сеянцев можно воспользоваться любой готовой почвой для овощных культур из соседнего хозяйственного магазина. Laakiin waxaa ugu wanaagsan inay ciidda u diyaariso gacmohooda. Si aad tan u samayso, ku dar carrada cawska, ciid, peat iyo vermiculite (1: 1: 1: 1), ama diyaariso isku dar ah digada cagaarka ah, cawska iyo ciid (6: 3: 1). Sida kor ku xusan, qajaar ma u dulqaadanaanta acidification ee ciidda, sidaas darteed, haddii loo baahdo, substrates sida waa in la alkalized leh laftada ama lime biyo. Waa shardi u ah carrada noocan oo kale ah waa mid ba'an, taas oo ka caawisa caleemaha yar yar si looga fogaado infekshanka fangas. Si loo dhammeeyo, substrate diyaar ah ayaa lagu shubay lakab ah 1.5 cm ku rid weel dabacsan oo ku dar foornada +120 ° S ilaa 45 daqiiqo.
Waa muhiim! Geedo Cucumber dulqaad si xad dhaaf ah qoynta substrate, sidaas daloolka dheecaan waa in la siiyaa dheriga for geedo.
Abuurka beerista waxay ku qaataan dhowr toddobaad ka hor intaan lagu beerin geedo carrada furan. Badanaa waqtigaan wuxuu dhacaa qeybta hore ee Abriil ama bilowga Maajo. Waqtiga qalliinka ee ciidda dabiiciga ah, ugu yaraan 2-3 caleemo run ah waa in la sameeyaa dhirta. Isla mar ahaantaana, geedo waa in ay ahaato mid u ah nidaam xidid weyn oo xoog leh. Abuur walba waxaa lagu beeray weel shakhsi ah, waa shardi u ah geedo qajaar ah. Nidaamka asaasiga ah ee sprouts deriska ah ayaa si adag u dhuujin karaa iyaga, sidaas nidaamka kasta oo kala gooni ah ee geedo waxay sababi kartaa dhimashadooda. Abuurka horay loo diyaariyey oo la kariyey waxaa lagu beeray substrate yar yar qoyan si qoto dheer ah 1.5-2 cm, ka dib kaas oo waxaa si adag u daboolay lakabka ah ee ciidda oo ku saabsan 1 cm qaro weyn. meel diiran oo iftiin leh. Xaaladaha qoyaanka iyo kuleylka (qiyaastii +25 C) 10 cisho gudahood, caleemaha ugu horreeya ee koray ayaa u muuqda. Ka dib markaa, hoyga waxaa laga saaraa dheryihii waxayna u dhaqaaqeen goob diiran, oo si fiican u ifaya si koritaan dheeraad ah.
Daryeelka caleemaha dhalinyarada waa wax aan ka duwaneyn beerashada geedo dalagyo kale oo miro ah. Dhirta waxaa ku jira meel diiran, oo si wacan u iftiimiya heerkulka habeenkii laga bilaabo +20 ° C ilaa +23 ° C iyo habeenkii habeenkii +18 ° C Nadiifi ciidda hadba sida loogu baahdo, ka dib muuqaalka diirran yar oo qoyan, laakiin aan ka badnayn laba jeer toddobaadkii. Waraabinta waxaa lagu sameeyaa biyo nadiif ah oo diirran oo diirran (oo ku saabsan +22 ° C), tan iyo isbedelada deg-dega ee heerkulka waxay saameyn xun ku yeelaneysaa koritaanka geedo.
Geedaha sidoo kale waxay u baahan yihiin iftiiminta qasabka ah leh nalalka dhaadheer, sida koritaanka dhirta caafimaad leh, muddada iftiinka waa inay ahaataa ugu yaraan 14 saacadood. Si arrintan loo sameeyo, waxaad isticmaashaa nalalka beerta gaarka ah ama laydhka caadiga ah. Geedka geedo uma baahna quudin dheeraad ah marxaladdan, sidaa darteed waxay qallajinayaan nidaamkan kaliya kaddib marka dhirta yaryar lagu beeray ciidda furan.
Waa muhiim! Haddii aadan lahayn karti farsamo si aad u dheer ku muujiso geedo, dhirta waa in loo wareejiyaa meel qabow leh heerkul ah oo ku saabsan +15 ° C, haddii kale waxay u horseedi doontaa dheecaan xad dhaaf ah iyo khafiifinta ee asliga ah.
Muddo ka dib, geedo ayaa ku quusaya dher cusub. Nidaamka waxaa la sameeyaa hal mar oo keliya haddii nidaamka xididka geedo ayaa si buuxda u daboolay substrate. Tan waxaa lagu go'aamin karaa godka dheecaanka. Sida ugu dhakhsaha badan xididdada dhalinyaradu ka soo baxaan - waxaad u baahan tahay inaad isla markiiba u guurto geedo si awood ballaaran. Dhar kasta oo dhirta ayaa ku habboon dherer, halka cabbirka taangiga cusub ee dhexroorka waa inuu ahaado 3-4 cm ballaadhan dherer hore.
Qiyaastii usbuuc ka hor intaan la beeriin dhirta goobta, way hubaal yihiin. Hannaankani wuxuu kordhiyaa fursadaha geedo si ay ula qabsadaan xanuun la'aan, sidoo kale waxay siinaysaa fursad ay kuugu diyaariso qaboojiye fiiqan. Si tan loo sameeyo, inta lagu guda jiro toddobaadka, dherarka qajaarka waxaa loo qabtaa maalin kasta hawada furan. Marka ugu horeysa dhirta waxaa loo wareejiyaa wadada udhaxeysa badhtamaha maalinta, 2-3 saacadood. Dheeraad ah, waqti ka dib, dhererka waqtiga geedo ku jiraa hawada si tartiib tartiib ah u kordha, ilaa dhaqdhaqaaq buuxa ee xaaladaha dabiiciga ah. Labo maalmood ka dib joogtada joogtada ah ee hawada u furan, dhirta ayaa si buuxda u diyaarsan inay u guurto sariirta beerta.
Ka dib markii 2-3aad ee ugu horeysay ee caleemaha this muuqan on geedo, waxay yihiin transplanted galay ciid furan. Haddii qajaar la kobciyo cimilada qabow, waa inaad sugto ilaa 5-6 buqshadood oo ka muuqda sprouts, haddii kale waxay dhiman karaan. Intaa waxaa dheer, ka hor inta geedo transplanting ilaa meel joogto ah, waa in aad si dhab ah u sugto muddada wanaagsan ee this. Ugu horreyntii, waa maqnaashaha roobab culus iyo celceliska heerkulka maalinlaha ee heerkulku yahay +18 ° S. Badanaa muddadan waxay ku dhacdaa bartamaha dhexe ama badhka bisha. Dalagyada waxaa la sameeyaa fiidkii laga bilaabo 18.00 ilaa 20.00, tan iyo iftiinka iftiinka qorraxdu waxay horseedi kartaa dhirta aan dhali karin.
Fiiri noocyada ugu caansan ee qajaarka.
Qajaar dhalinyaro ah ayaa lagu beeray si wanaagsan oo bacrimiyey oo si taxaddar leh loo beeray, ciidda, ka fog geedaha, duurka iyo dhismooyinka beerta ee meelaha furan iyo qoraxda. Geedo beeray fogaan ah 25-30 cm midba midka kale ee saf culus oo qiyaastii 15 cm qoto dheer, oo leh dhexdhexaad ah 50-60 cm. Yoobashada qajaarku waa dhir yar oo jilicsan oo leh nidaam xidideysan, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh uga saarto dhirta beerta. Tani, carrada ee dheriga waa la waraabiyaa si adag, taas oo ka caawisaa in gebi ahaanba qoyaan substrate si joogtada ah loo doonayo. Ka dib markaa, geesaha dheriyada leh qajaarka dhalinyaradu waxay yaryar hoos u dhajiyaan dusha oo dhan, taas oo ka caawisa kala-soocidda dheriga. Taas ka dib, iyada oo la socdo dhaqdhaqaaqyada iftiinka leh, waxyaabaha ku jira dheriyada ayaa la soo saaraa.
Waa muhiim! Ruxashada dhulka laga bilaabo nidaamka xididka ee geedo waa la mamnuucay, maadaama ay tani waxay dhaawici doontaa nidaamka xidid jilicsan.
Dhirta la soo qabto, oo la socota ciidda, fadhiiso safafka, ka dib markii ay si adag ugu xidhaan ciidda. Xaaladda beerashada dalagyada carrada saboolka ah ee saboolka ah, geedo waxaa lagu daboolaa isku dar ah humus iyo soday (1: 1), tani waxay gacan ka geysaneysaa in ay xoojiso koritaankooda. Ka dib markii la beero, sariiraha waxaa lagu shubaa biyo badan waxayna keligood tagaan ilaa qoyaanka si buuxda loo nuugo. Taas ka dib, sii wad dhidibada qaababka taageerada dhirta qoyan. Haddii ay jirto suurtogalnimada in la qaboojiyo qaboojinta, sariiraha ayaa qalab u haya hoy. Si arrintan loo sameeyo, marka la eego dhammaan beeraha, dabeecadaha gaarka ah ee biraha ama qalabka alwaaxda ayaa lagu rakibay, taas oo ka dhigaysa filim shucaac ah oo daahfuran. Habeenkii, geesaha filimka ayaa si adag u daboolay carrada. Tani waxay keenaysaa "saameyn koronto" iftiin, taasoo hagaajin karta heerkulka guud ee dhismaha.
Agrotechnics abuurka abuurka ah ee dhulka u furan
Maanta, beerista qajaarka ee soo saarka beerista si toos ah ciidda furan waxay heleysaa caan baxa sii kordhaya sanad walba. Codsigan beeraha wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo wanaagsan, oo ay ka mid tahay hoos u dhaca xoogga shaqaalaha iyo kharashyada yar yar. Laakiin badanaa, dad badan ayaa weli ku fashilmay in ay helaan dhirta cagaaran ee caafimaad leh, taas oo ah sababta ugu weyn ee beeraha aan habooneyn ee dalagyada. Aynu sii fahmin nuxurka weyn ee habkan.
Sida kor ku xusan, qajaarku wuxuu ku jiraa noocyada kulaylka-jecel ee dalagyada, sidaa daraadeed dhirtu waxay leeyihiin shuruudo dhab ah xaaladaha deegaanka. Kalluumeysiga maaddada abuurka waxaa lagu fuliyaa dhammaadka guga, marka ay suuragal tahay in uu dhaxan habeenkii si buuxda u baaba'o. Inta badan muddadan waa bilowga ama badhtamaha May, tan iyo waqtigaan ciidda si buuxda u kululaanaya + 10-15 ° C. Goobta ugu wanaagsan ee beerashada waa dhinaca koonfureed ee goobta, laga ilaaliyo dabaysha qabow, haddii kale dhalidda dalagga waxaa hoos loo dhigi karaa dhowr jeer.
Ugu fiican dhammaantiis, haddii goobta uu ku yaal buurta yar, hawo qabow badanaa waxay joogtaa meelaha hoose, taas oo guga hore u horseedi karto barafoobidda beeraha. Sidoo kale waa inaad daryeeshaa in heerka dhulka hoose ee sariiraha mustaqbalka ay ugu yaraan 1 mitir tahay, haddii kale qoyaanku wuxuu horseedi karaa cudurrada cayayaanka ee qajaarka. Si looga fogaado joogitaanka biyaha, gargaarka ciidda waxaa inta badan lagu sameeyaa gacan ka helida ciidaha webiga, gaar ahaan haddii dhoobo ama chernozem ka dhacda aagga.
Beeridda si toos ah ayaa loo sameeyaa ciidda furan, ka fogaanshaha dhismayaasha isku dhafka ah, sida noocyada kala duwan ee "Altai" waxay miro wanaagsan u tahay xitaa jawiga qabow ee qabow. Laakiin haddii aad qorsheyneyso in aad hesho miraha udgoon leh ilaa dayrta goor dambe, waa inaad koraan qajaar si fiican u qalabaysan iyo, haddii ay suurtagal tahay, aqalka dhirta kulul. Xulashada ugu fiican waa dhismaha qaababka difaaca ee ku-meel-gaarka ah ee laga sameeyey biraha qoryaha iyo filim shucaac ah. Iskuulada ku-meel-gaarka ah waxay suurtogal u tahay in la abuuro heer-kul ah heer-kulka loogu talagalay abuurka, ka dibna dhismaha si ammaan ah loo demiyo ilaa xilli-xiga. Xaaladdan oo kale, wakhtiga kululaynta xasilloon, dhirta qaangaarka ah waxaa lagu aasaasay goobta si fruiting fasting iyo taajir ah. Intaa waxaa dheer, waa farsamadan sahlan ee suuragelisa in la kordhiyo xilliga guud ee qajaarka fruiting, taas oo si gaar ah muhiim ugu ah gobollada waqooyiga qabow.
Beeridda miraha waxaa lagu sameeyaa ka dib markii kuleyl iyo jawiga atmospheric ah heerkul ah + 10-15 ° C, tan iyo heerkulka hooseeya abuurka ku sii jiro xaalad ah anabiosis. Inta badan waqtigaan wuxuu dhacaa qeybta hore ee bisha May, laakiin haddii aad qorsheyneyso inaad qashinka qajaar la jilciso filimka, waxaad ku beeran kartaa 1-2 toddobaad ka hor. Abuurka horay loo nadiifiyey oo adag ayaa ku habboon beero.
Hardening waxaa la sameeyaa 48 saacadood, tanina, abuurka ayaa si siman loogu duubay lakabka keliya ee dhar nadiif ah (ama faashad), ka dibna qoyaan biyo qabow. Nudaha qoyan ee abuurka ah ayaa la dhigayaa qaboojiyaha, ka dibna waa la saaraa oo la nadiifiyaa.
Nadiifinta waxaa lagu sameeyaa qallajinta abuurka 25 daqiiqo oo ah 1% xal of kiniinka potassium ama 70% khamriga. Dhibaatada iyo jeermi-dilista waxaa la sameeyaa dhowr saacadood ka hor inta aan beero, haddii kale waxtarnimada habraaca ayaa hoos u dhacaya dhowr jeer. Dhirta waxaa lagu beeray safo, ujeedadaas, safafka waxaa loo sameeyey fogaan ah 60 cm midba midka kale iyo qoto dheer oo ku saabsan 2-3 cm Seeds waxaa la dhigaa ciidda kooxo yaryar oo 2-3 qaybood leh masaafada 25-30 cm. waa inuu noqdaa qiyaastii 50 g / sq. Ka dib markaad abuuraysid, sariirta si taxadar leh ayaa loogu duubay ciidda waxayna si badan u waraabisay. Xaaladda carrada saboolka ah ee saboolka ah, abuurku wuxuu ku daboolaa humus ama isku dar ah ciidda iyo sida balka (1: 1). Kadib markaad beertid, xabbad isugeyn ah ama maqaar filim ah ayaa lagu rakibay qalabka (haddii loo baahdo).
Tan iyo inta badan ee nidaamka xididka ee qajaarka waa lakabyada sare ee ciidda, sariiraha leh khudraddan waxay u baahan tahay waraabin ah iyo waraabinta soo noqnoqda, ka dib markii diirka dabeecadda qalalan muuqan dhulka. Xaaladdan oo kale, dhirta si fiican u jawaabaan waraabka ee caleenta, sidaas darteed, waraabiyo sariiraha waa in lagu fuliyaa si ballaaran, haddii kale caleenta qalalan karaa iyo dhiman karaa. Si kastaba ha ahaatee, si xad dhaaf ah u qoyso ciidda ma aha mid u qalantaa, maadaama ay joogteynta joogtada ah ee biyaha ay si xun u saameeyaan horumarinta nidaamka asaasiga ah waxayna sababi karaan dhaawacyo ka dhashey.
Baro naftaada faaiidooyinka waraabka faleebo ee dacha.
Xaaladaha qoyaan ku filan, waraabinta waa inay noqdaan wax ka badan 2 jeer toddobaadkii. Marka hore, waraabinta sariiraha waxaa lagu fuliyaa heerka 3-6 l / sq. m. Si tartiib ah, oo leh koritaanka dhirta, heerka socodka wuxuu kordhiyaa ilaa 6-12 l / sq. Isla mar ahaantaana, biyaha waa in ay qasab noqdaan in ay qoyaan basaska si qoto dheer ugu yaraan 20 cm .. Muddada abaarta daba dheeraatay, xaddiga waraabinta waa in la kordhiyaa, illaa maalin waraabinta. Inta lagu jiro roobab daba dheeraaday, waraabinta ayaa la joojinayaa ka hor inta ciidda la qalajiyo.
Muddada ugu fiican ee waraabinta waa xilliga fiidkii, tan iyo shucaaca qoraxda habeenkii waxay horseedaa uumiga degdegga ah qoyaanka xitaa dusha ciidda. Nidaamka, isticmaal dabiiciga ka hor kulul, biyo nadiif ah oo kala gooni leh heerkul aan ka yarayn +18 ° C Waa mamnuuc in sariiraha lagu mayro biyaha qabow, sida dhibcaha fiiqan waxay leeyihiin saameyn waxyeello ah koritaanka dhirta waxayna xitaa u horseedaa daadinta ugxan-yarta.
Waa muhiim! Sariiraha waxaa lagama maarmaan ah in lagu adkeeyo qoyaan joogto ah, maadaama dhibcood oo deg deg ah ay keeni karaan qadhaadh midhaha qajaarka.
Waqtiga firaaqada iyo jaridda dhirta ayaa ka mid ah xaaladaha ugu muhiimsan ee beerista habboon ee khudradda sida qajaar. Marka ugu horeysa, jaridda dhirta iyo dabacsanaanta ayaa la qabtaa kadib markii caleemaha ugu horeeya ay muuqdaan, kadibna ku celiyaan 7-10 maalmood oo kasta. Gacan-siinta si taxaddar leh ayaa loo fuliyaa, tan iyo inta badan ee nidaamka xididka dhirta ku jira ee lakabyada sare ee ciidda, sidaas darteed waxaa jira itimaal sare ah ee waxyeello. Si looga hortago waxyeelada xididada, cawska ayaa la gooyaa asal ahaan, oo aan ka badnayn 1-2 cm oo ciidda ah. Loosening waxaa lagu talinayaa isticmaalka fargeetada beerta, kuwaas oo si tartiib ah ugu xayiran ciidda agagaarka baadiyaha ilaa qiyaastii 15-20 cm ka dibna isla markiiba la bixiyay. Xaaladdan waa in si habsami leh loo fuliyaa, iyada oo aan dhaqdhaqaaqa degdega ah, iyada oo aan qalabayn dhulka.
Daaweynta musqusha waxaa la sameeyaa horraantii subixii ama fiidkii, haddii kale dhirbaaxada iyo dabacsanaanta waxay keeni kartaa qalajinta xad dhaafka ah ee ciidda. Waxaa haboon in la doorto maalintaan qalalan iyo qorrax leh, inta u dhaxeysa waraabinta. Waqtiga roobka dheeraadka ah waxaa lagu sameeyaa qalliinka ka dib qalajinta iftiinka ciidda.
Maaskarada waxay bixisaa fursad si aad ah u kordhiso dhalidda beeraha. Pasynka waxaa loogu yeeraa caleemo aan caleenta lahayn ee dhirta oo la sameeyay taasoo keentay koritaankooda dabiiciga ah iyo horumarkooda. Kadib markii laga saaro, dhirta looma baahna inay ku qaadato awood dheeri ah si loo ilaaliyo faahfaahinta ladnaanta. Taa baddalkeeda, aaladda dhirta ayaa xoojisaa xoog dheeraad ah si ay u yeeshaan samaynta firfircoonida miraha cusub, taas oo ugu dambeyntii keeneysa kororka guud ee dhalidda. Marka pasynkovanii inta badan ka saaro dhammaan caleemaha lateral ah ee ku jira axils of 5-6 yar caleemaha hoose, iyo sidoo kale ugxansidaha ee axils ee hoose ee 3-4 caleemo. Nidaamka si taxadar leh ayaa loo fuliyaa, iyadoo la isticmaalayo fiiqan fiiqan ama hindhiso, sida qanjirada aan adkaa ahayn waxay dhaawici kartaa asaasiga ugu weyn. Nidaamka ugu wax ku oolka ah waa in laga saaro caleemaha dhinaca aan ka badnayn 6 cm oo dherer ah, maaddaama mid kasta 10cm oo dheeri ah "cuno" ilaa 1 kg oo miraha ah.
Si aad u sameysid duurka midheysan, waxaad u baahan tahay:
marka dhirta ay gaarto heerkul ah 40-50 cm, gabi ahaanba ka saaro dhammaan laamihiisa lateral, iyo sidoo kale ugxan;
ka dib markii uu dhererka ugu weyn ee 80ka dhirta ku dhajiyo dhirta, qanjirro caleemaha lateral ka gaaban 20 cm, ka tago 1 ugxan ah on kuwa haray, iyo qanjiradoodu ay sare;
marka dhirta dhererkeedu yahay 1 m, caleemaha qiyaastii 40 cm dheer waa in la tagaa on top, iyo wax ka badan 2-3 ugxan iyo waraaqo waa in laga tago mid kasta oo iyaga ka mid ah;
ka dib markii baadiyaha ay gaartey dherer ka badan 1 m, halka fasaxa ugu sareeya 3 caleemo 40-50 cm dheer leh 3-4 ugxan iyo dhowr caleemo kasta, haddii loo baahdo, qanjirta sare.
Qajaar qoyan oo wanaagsan ayaa ah mid ka mid ah shuruudaha ugu muhiimsan ee tayo sare leh iyo mid hodan ah. Waxay bixisaa fursad:
ilaalinta dhirta ka yimaada farsamada;
si loo hagaajiyo iftiinka qorraxda ee dhirta iyo hawada, taas oo ka caawisa in ay ka fogaadaan midhaha miraha;
keydso wadarta guud ee loo qoondeeyey beerista khudaarta;
kor u xoojinta koritaanka baadiyaha iyo kobcinta miraha;
fududee daryeelka bukaanka iyo goosashada.
Maanta, waxaa jira siyaabo badan oo loo ilaaliyo dhirta qajaarka, laakiin kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah:
garter toosan - Wareega kasta oo fogaan ah 1-2 cm, bir ah ama tiirar alwaax ah ayaa lagu qodayaa ciidda, inta u dhaxaysa iyaga oo u kala fidiya dhawr xargo ama fiilooyin fogaan ah 25-30 cm midba midka kale, ee kobaca koritaanka, dhirta ayaa loo jeexjeexay taageerada;
garter toosan - waa qaab dhismeedka U-qaabeeya oo ka sameysan alwaax ama bir ah, waxaa lagu rakibay safka oo dhan, ka dib marka xadhkaha khafiifka ah lagu yareeyo saldhigga duurka, taas oo marka dambe noqoto taageero loogu talagalay dhirta, badiyaa xayiridda xargaha yar yar ee qoryaha yar yar, kuwaas oo la kaxeeyo meel kasta oo baadiyaha ah ;
garafka jilicsan - kaalmo toos ah oo toosan ayaa lagu rakibay sariir yar, oo kor ka soo baxda xarkaha dhuuban, waxay ku xiran yihiin qoryaha yar yar ee saldhiga duurka; dhirta waxaa lagu dhajiyaa xadhigga, ka dibna qaabdhismeedka oo dhan wuxuu qaataa foomka hut shimbiraha ah;
garter shabaqa - Taageerooyin xooggan ayaa lagu rakibay labada geesood ee sariirta, inta u dhaxaysa biraha muraayadda ah ama mesh balaastik ah oo la fidiyo, inta lagu gudajiro kobcinta qajaar ayaa loo geliyaa mesh, taas oo noqota mid ka mid ah taageerooyinka ugu kalsoon ee loogu talagalay.
Mid kasta oo ka mid ah hababkaasi waxay leedahay ujeedo cayiman iyo cilladaheeda. Горизонтальный способ даёт возможность соорудить качественную опору всего за несколько часов, однако дачники используют его нечасто, так как соседние конструкции нередко затеняют друг друга. Вертикальная подвязка требует длительного времени, однако она незаменима, если под овощ заняты большие площади.Qalabka khafiifka ah waxaa loo isticmaalaa in lagu hubiyo sariiro yaryar, maadama qaabdhismeedka noocan oo kale ah uu qaban karo wax ka badan 10-20 dhirta.
Si aad u samayso qajaarka si fiican u koraan oo u dareemaan raaxo xataa xitaa aag yar, waxaa habboon in la rakibo shabaqa trellis.
Garter on shabeel waa habka ugu caansan ee lagu xiro dhirta, maadaama ay ka mid tahay dhammaan qaybaha wanaagsan ee hababka kor ku xusan. Si kastaba ha noqotee, naqshadahaan badanaa waxay leeyihiin qiimo aad u sarreeya. Taas ayaa ah sababta habkan loo isticmaalo si gooni u ah inuu bannaanka u khibrad badan oo ku lug lahaa beerashada khudradda sanado badan.
Roodhiga wuxuu u baahan yahay tiro badan oo ah nafaqooyin kala duwan, gaar ahaan inta lagu jiro samaynta firfircoon ee midhaha. Marka ugu horeysa, sariiraha waxaa la bacrimiyey bilowga ah ubax, ka dibna dhaymada ayaa lagu soo celiyaa bilowga fruiting, kadibna 10-15 maalmood oo kasta, sida caadiga ah qajaarka waxaa la bacrimiyey wax ka badan 3-4 jeer xilli kasta. Nidaamka waxaa la sameeyaa galabtii, galabtii galabtii, ka dib markii la waraabiyo.
VIDEO: KAALMADA BULSHADA LOOGU TALAGALAY Sida quudin ku habboon wax kasta oo Bacriminta macdanta adag ee wakiillada Pumpkin. Hase yeeshee xalka ugu badan ee la isticmaalo waa superfosphate (20 g / 10 l oo biyo ah), "Kemira Universal-2" (40 g / 10 l oo biyo ah), iyo "Kemira Lux" (30 g / 10 l oo biyo ah), kuwaas oo lagu dabaqo xididka geedka. Heerka socodka ee dareeraha shaqeyntu waa qiyaastii 5 litir 1 mitir labajibbaaran. beeraha m. Qodobka ugu fiican ee dhan qajaarku wuxuu ka jawaabayaa nafaqada dabiiciga ah. Si tan loo sameeyo, isticmaal xal xashiishad ah (1:25) ama mullein (1:10). Dareerka waxaa lagu dabaqaa xididka duurka, halka isticmaalka dheecaanka shaqeynaya uu yahay 5 l / sq. m
Inta badan, warshad qajaar ah ayaa waxaa saameeya cudurada faafa ee soo socda:
anthracnose - Cudurku wuxuu keenaa dhibco huruud ah ama midabyo leh caleenta iyo miraha oo leh dhexroor 2-3 cm, taas oo ugu dambeyntii keenta in ay hoos u dhigto aagagga ay saameeyeen iyo dhimashadooda, taas oo ah sababta keentay anthracnose inta badan sababta ugu weyn ee geerida dhow ee dhirta; marka cudurku dhaco, dhirta waxaa lagu daaweeyaa xal of oxychloride copper (40 g / 10 l oo biyo ah);
bakteeriyada - waxay muujineysaa dhibco cagaaran oo kala duwan oo ku saabsan cagaarka dhirta, iyo sidoo kale dhibco ool ah ama madow oo u dhexeeya xididdada caleemaha, wakhti ka dib waxay keenaan dildilaaca cagaarka cagaaran, taasoo keenta geerida beerashada; waxay la dagaallamaan infekshanka iyagoo daaweynaya aagga oo leh xal of oxychloride copper (40 g / 10 l oo biyo ah);
perinosporosis - ayaa lagu muujiyey qaabka dhibco huruud ah ee caleenta, oo ugu dambeyntii soo noqnoqdo, infekshanku wuxuu keenaa baadiyaha inuu ka danbeeyo koritaanka, taas oo saameeysa korodhka guud; haddii uu cudurku jiro, beeritaanka waxaa lagu daaweeyaa Acrobat MC fungicides 69%, Ridomil MC 72%, Kurzat R ama isbarbardhigga isbeddelka.
Waxaan kugula talinaynaa inaad barato sida loola tacaalo cudurrada kale ee qajaarka.
Intaa waxaa dheer, inta lagu jiro xilliga firfircoon ee sii kordhaya, qajaarka wuxuu la dhibban karaa cayayaanka soo socda:
tuura - Noocyada firfircoon ee cayayaanka ayaa keena muuqaalka kore ee caleemaha cad ee caleemaha, taas oo wakhti ka danbeeya isku darsameysa oo keena dhimashada cagaarka, buurnimadu waxay kobcinaysaa xilliga sii kordhaya, taas oo ah mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee soo-saarka beeraha; Si loola dagaallamo cayayaanka, isticmaal xalalka "Aktely", "Confidor" 20%, "Karate" ama kuwa kale;
Bastoolad - Cayayaanka yaryar ee qaababka yar-yar leh ee leh casaan-casaan ama casaan-cagaaran ee jirka, bukaanku wuxuu nuugayaa casiir ka soo baxa dhirta, taas oo keeneysa in la joojiyo koritaanka iyo fruiting ee baadiyaha, oo leh horumarin xad dhaaf ah ee dhimashada cayayaanka ee geedo dhacdaa; Waa suurtagal in laga gudbo cayayaanka iyadoo la daaweynayo sariiraha leh Actellic 50% ama Talstar 10%;
aphid - waa cayayaanka yar yar oo dhererkoodu yahay 2-3 mm, kaas oo ah xayawaan ku yaal qaybta hoose ee caleen, nuugista dheecaanka geedka, taas oo keeneysa in ay isku badasho oo ay dillaacdo caleenta, iyo kiisaska casriga ah, iyo dhimashada geedka; Waa suurtagal in laga gudbo cayayaanka iyadoo la daaweynayo beeraha xalalka "Iskudarka" diyaarinta 20% ama "Karate" si ay u kala doortaan;
bugta qajaarka - Naaska yar ee nuugista, kaas oo inta badan dhaca inta lagu jiro xilliga dhammaan xilliyada firida ee firfircoon ee khudradda, inta lagu jiro naqshadaynta, cayayaanku wuxuu waxyeeleeyaa caleemaha yar yar, burooyinkeeda iyo caleemaha, taas oo ugu dhakhsaha badan u horseedda guuldarada ugxan-sidaha, iyo kiiska horay u sii jirey dhimashada caleenta; burburinta dulinta iyadoo la daaweynayo beeraha xalalka diyaargarowga "Confidor" 20%, "Karate" ama leh analogues.
Waa waxtar leh in la ogaado sida loo takhaluso cayayaanka kale ee qajaarka.
Marka la daaweynayo dhirta beeraha leh habab kala duwan, waxaa lagama maarmaan ah in la raaco xeerarka soo socda:
Ku buufinta waxaa lagu fuliyaa subaxda ama fiidka, ee qalalan, laakiin cimilo badan oo culus;
xalalka shaqada waxaa loo diyaariyaa sida waafaqsan soo-saaraha soo-saaraha;
ka badan xadiga daaweynta ee daawooyinka loogu talagalay daaweynta dhirta waa la mamnuucay, maadaama ay taasi keeni karto gubasho cagaaran;
daaweynta mukhaadaraadka waxaa lagu sameeyaa qalabka difaaca, adigoo isticmaalaya respirator;
inta lagu jiro buufinta sigaarka, cunida ama cabitaanka si adag ayaa loo mamnuucay;
ka dib markii lagu buufinayo sariiraha, waa lagama maarmaan in la dhaqo saabuunta dhammaan meelaha bannaan ee jidhka, iyo in dharka shaqada laga saaro haraaga diyaargarowga.
Si looga hortago horumarinta cayayaanka ama cudurrada faafa, dhirta qajaarka waa in ay noqotaa in lagu daboolo dhammaan noocyada daaweynta ka hortagga ah ee leh saameynta cayayaanka fungicidal ee cayayaanka. Maanta, waxqabadka guud ee xeeldheerta, hababka ilaalinta ee soo socda ayaa si firfircoon loo isticmaalaa:
"Ridomil Gold" 25%.
Intaa waxaa dheer, si loo ilaaliyo dhirta qajaar ka soo cudurada, waxaa lagama maarmaan ah in lagu adkeeyo agrotechnology guud ee beerashada dalagyada, oo ay ku jiraan rotation ku habboon, jaridda dhirta iyo quudinta, iyo sidoo kale nuugaan si tartiib ah.
Ma taqaanaa? In Russia, qajaar ah u muuqday in qarnigii XVI, inta lagu guda jiro xukunka Ivan ah ee cabsida. Muddo dheer, dhaqanka waxaa loo tixgeliyey cusub inuu dhadhamo, sidaas darteed miraha kiisaska intooda badan waxaa lagu daboolay salting ama dib udagasho.
Caadi ahaan, goosashada ugu horreysa waxaa la qaadaa qiyaastii 8 usbuuc ka dib marka la beerto, qeybta dhexe ama qaybta labaad ee bisha Juun, ka dib marka dalagga la goosto marka uu korayo, 1-2 maalmood oo kasta. Waxaa haboon in subaxii hore ama fiidkii goor dambe la helo. Inta badan, isticmaalka ilaalinta iyo qoyaanka, qajaar ayaa la ururiyaa ka dib markii ay gaadheen cabbir midho ah oo ku saabsan 8-10 cm dhererka, laakiin haddii ay diyaar u yihiin diyaarinta dhirta, miraha waxaa la jeexay ka dib markii ay dherer ilaa 3-5 cm.
Beeridda waxaa lagu sameeyaa manhaj maalinle ah oo qorrax leh. Miro ayaa si tartiib ah u xoqaya jirida iyada oo gacan ka geysata is-goysyada beerta, xiirashada ama qalabka kale. Qajaarka la uruuriyey waxaa la geliyaa dambiilaha ama weelasha beerta, ka dibna, haddii loo baahdo, ku shub weelasha ku habboon gaadiidka. Dalagga ayaa si taxadar leh looga saaraa beerta, ka ilaalinta waxyeellada midhaha, haddii kale qajaarku wuxuu u jilcin doonaa dhowr maalmood.
Baro sida loo ilaaliyo qajaarka cusub xilliga jiilaalka.
Caadi ahaan, qajaar cusub ayaa lagu kaydiyaa muddo aan ka badnayn 14 maalmood, iyo kaydinta muddo dheer ee khudradda, kuleylka kulul ama qabow. Inkastoo miraha cusub uu si guul ah u hirgelin karo cusub 4-5 toddobaad. Si arrintan loo sameeyo, qajaarka waxaa la geliyaa daboolka yar ee weelasha yar yar oo buuxsamay 1-2 cm oo biyo nadiif ah, kadibna loo diro qaboojiyaha (+ 3-5 ° S). Foomkan, miraha way ku cusub yihiin ugu yaraan 1 bilood, laakiin waa lagama maarmaan in la baddalo biyaha weelasha miraha hal mar maalintii.
Qajaarka iyo qolofka borotiinka. Si arrintan loo sameeyo, midhaha ayaa si taxadar leh loogu daboolay ukunta cad, ka dibna la qalajiyey si dabiici ah. Ka dib markii la qalajiyo, borotiinku wuxuu abuuraa filim cufan oo ka hortagaya uumiga muddada fog ee qoyaan ka soo miro. Foomkan, heerkulkiisu yahay + 3-5 ° C, qajaar cusub ayaa la keydin karaa 1 bil.
Sida kor ku xusan, warshad miro ah sida qajaar waa nooca loo yaqaan 'capricious type', sidaas darteed, bannaanka ayaa inta badan la kulmaan dhibaatooyin badan inta lagu jiro beerashada. Waxaa ka mid ah kuwa ugu caansan waa kuwan soo socda:
dildilaaca iyo huruuda caleemaha - waa natiijada ka dhalan karta shuruucda guud ee beerashada dalagga ama natiijada dhaawaca cayayaanka ee cayayaanka iyo cudurrada kala duwan Si loo ciribtiro cudurka, waxaa lagama maarmaan ah in la hagaajiyo waraabinta iyo bacariminta beeraha, iyo sidoo kale in lagu sameeyo daaweyn adag oo leh habka kiimikada ee ilaalinta;
Baro sababaha iyo hababka ula dagaallanka huruuda iyo qalajinta caleemaha qajaar.
xilliga guga - Waxaa laga yaabaa in sababo badan, laakiin badanaa waa natiijada waraabinta dhirta leh biyo qabow ama dalagyo xad dhaaf ah; Si loo baabi'iyo cudurada, waxaa lagu talinayaa in la dhajiyo beeraha (haddii loo baahdo), iyo sidoo kale in la hor mariyo biyaha waraabinta ugu yaraan +18 ° C;
Soo ogow sababta ugxansiisaha qajaarku huruud u noqdaan kulaylka.
qalajinta dhirta - Inta badan waa sababta keentay horumarinta ciidda ee cayayaanka kala duwan (wireworms, Qudhaanjadu, dhalinayaan dirxiga duulaya, iwm); Si looga fogaado dhaawaca dhirta, daaweynta diyaarinta ee Fentiuram (5-10 g / kg oo miraha) ayaa lagula talinayaa;
lafdhabarta - Natiijada ka soo korodhka ciidda inta lagu jiro waraabka; Si loo tirtiro dhibaatada, waraabinta sariiraha waa in la hagaajiyaa, iyo dhirta waa in lagu daaweeyaa fungicides adag;
hoos u dhac ku yimid dhalidda - xaaladaha badankood waa natiijada hoos u dhac ku yimaada nafaqooyinka carrada; si loo soo celiyo midho-dhalidda dalagga, waa lagama maarmaan in la quudiyo beeraha xalalka bacriminaha dabiiciga ah ama macdanta sida waafaqsan tiknoolajiyada kor ku xusan;
qadhaadh - waa natiijada isbeddel deg-deg ah ee qoyaanka; si looga hortago sii xumeynta dhadhanka qajaarka, dhirta waa in la siiyaa qoyaan tartiib tartiib ah oo joogto ah inta lagu jiro xilliga sii kordhaya.
Cucumber "Altai" waa noocyo kala duwan oo dalagyo miraha ah, taas oo suurtogal u ah in la helo miraha qiimaha leh ee cimilada kulul iyo gobollada waqooyiga. Inkasta oo dhammaan noocyada dhibaatooyinka ah ee sii kordhaya, noocyo kala duwan ayaa maanta loo tixgeliyaa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee qajaar, sidaas darteed waxaa si ammaan ah loo beeray xitaa bannaanka aan la aqoon. Laakiin si aad u hesho dhalid heer sare ah oo deggan, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo dhamaan sharciyada aasaasiga ah ee beerashada beeraha.